Toerana 7 samihafa ho an'ny tetezana Mey | Vaovao momba ny dia
Toerana 7 samihafa ho an'ny tetezana Mey
Aorian'ny Paska dia tonga ny tetezana Mey, ho an'ny maro mialoha ny fialantsasatra fahavaratra nandrasana hatry ny ela. Ireo izay tsy nanam-potoana hivezivezena nandritra ny Paka dia afaka mamerina ny bateriany amin'ny alàlan'ny dia mankany amin'ilay toerana nantenainy hatry ny ela. Na izany aza, raha mbola tsy nanana toerana tao an-tsainao ianao fa azonao antoka fa hiala andro vitsivitsy ianao, Ireto ambany ireto dia manolotra toeran-kaleha samy hafa izahay amin'ny tsiro rehetra amin'ny tetezana Mey.
1 Fizahan-tany ara-tsiansa amin'ny tetezana Mey
1.1 Ny tranombakoka momba ny fivoaran'ny olombelona an'i Burgos
1.2 Faritanin'i Dinópolis any Teruel
1.3 Saintsaino ny lanitra feno kintana amin'ny El Teide
2 Fizahan-tany ara-pinoana eo amin'ny tetezana Mey
3 Fizahan-tany any Eropa amin'ny tetezana Mey
3.1 Prague any amin'ny Repoblika Tseky
3.2 Rouen any Frantsa
3.3 Cologne any Alemana
Fizahan-tany ara-tsiansa amin'ny tetezana Mey
Na dia mbola mitentina any Espana aza ny fizahan-tany ara-tsiansa, dia manana be dia be izany ary mitombo isa ny olona liana amin'ny fitsangatsanganana na fitsidihana mifandraika amin'ny siansa. Raha ny tena izy, any Espana dia goavana ny fahafaha-manao: manomboka amin'ny fitsidihana an'i Atapuerca sy i Teruel hiverina any amin'ny prehistory ka hatrany amin'ny fandinihana ny lanitra feno kintana amin'ny El Teide na amin'ny làlana matematika mamaky an'i Granada.
Ity karazana fizahan-tany ity dia mahafaoka ireo hetsika rehetra izay iantohan'ny siansa ny adihevitra afovoany, na eo afovoan'ny natiora, ao anaty tranombakoka na amin'ny tanàna iray.
Ny sasany amin'ireo toerana azonao tsidihina mandritra ny tetezana Mey izay mifandraika amin'ny fizahan-tany ara-tsiansa dia:
Tranombakoka momba ny fivoaran'ny olombelona ao Burgos
Ny tranombakoka momba ny fivoaran'ny olombelona an'i Burgos
Nipoitra avy amin'ny filàna fitehirizana, fanasokajiana ary fanaparitahana ireo tavela tamin'ny arkeolojika avy amin'ireo tranokala Sierra de Atapuerca, izay loharano iraisampirenena mifandraika amin'ny fizotran'ny fivoaran'ny zanak'olombelona.
Ny fitsangatsanganana manerana ny habakabaka amin'ny tranombakoka dia mamaly ny fanontaniana momba ny fivoaran'ny zanak'olombelona amin'ny fomba fijery siantifika sy ny fifandraisany amin'ny natiora. Ho fanampin'ny fampirantiana eo afovoany, mandrindra atrikasa fanabeazana, seminera ary fihaonambe ny tranombakoka ary koa fitsangatsanganana amin'ireo tranonkala niavian'ny harena ao aminy.
Faritanin'i Dinópolis any Teruel
Izy io dia valan-javaboary tsy manam-paharoa any Eropa natokana ho an'ny paleontôlôjika sy dinôzôro, izay misy tavela manan-danja hita tao amin'ny tanàna Aragonese. Safidy lavorary izy ity hankafizanao ny fiainam-pianakaviana satria hanana fotoana mahafinaritra ny ankizy ary ho hitan'ny olon-dehibe tena mahaliana izy io noho ireo hetsika fialamboly sy fanangonana fôsily.
Ao anatin'ny faritanin'i Dinópolis dia misy ny Dinôpolis Foundation izay misy paleontologista sy mpamerina amin'ny laoniny izay mifantoka amin'ny famotopotorana, fitehirizana ary fanaparitahana ireo lova paleontolojika ao amin'ny faritany.
Saintsaino ny lanitra feno kintana amin'ny El Teide
Tenerife dia nosy tsara vintana noho ny antony maro, ohatra ny toerana tsara indrindra hijerena kintana any Espana. Mandritra ny taona, manome antsika seho selestialy samihafa ny lanitra izay tsy azonao atao tsy diso raha any Tenerife ianao. Ity misy mpanadihady momba ny kintana iraisam-pirenena momba ny IAC ho an'ny fandinihana ny kintana izay mitarika fitsangatsanganana an-tsakany sy andavany mba hampianarana ny besinimaro ny toeran'izao tontolo izao onenanay.
Ny Nosy Canary dia fantatra amin'ny toe-piainany miavaka amin'ny kintana. Ny kalitaon'ny rahony dia arovan'ny Lalàna momba ny kalitaon'ny astronomia an'ny IAC Observatories ary manana Starlight Reservation telo izy ireo, ny marika manamarina ny fahalotoan'ny jiro ambany ao amin'ilay faritra.
Fizahan-tany ara-pinoana eo amin'ny tetezana Mey
Caravaca de la Cruz dia tanàna espaniola any avaratra andrefan'ny faritanin'i Murcia. Tanàna nandalovan'ny olona samihafa toa ny Iberianina, Romana na Silamo nandritra ny tantara ary naorina manodidina ny tranobeny, naorin'ny Commandery of the Templars tamin'ny taonjato faha-XNUMX.
Nandritra ny taonjato faha-XNUMX sy faha-XNUMX, i Caravaca de la Cruz dia niaina ny famirapiratany farany ambony indrindra rehefa lasa ivon-toerana politika amin'ny faritany lehibe iray izy. Amin'izany fomba izany, ity tanàna ity dia manana lova ara-javakanto-kolontsaina manan-karena vokatry ny lanjany manan-tantara. Fa Caravaca kosa, tanàna fahadimy, tanàna masin'ny Kristianisma.
Ny taona 2017 ankehitriny dia manondro fa eo anelanelan'ny taona Jobily isika ary mpino sy mpandeha an'arivony marobe no hanao fivahinianana masina any amin'ny Toeram-piarovana ao Vera Cruz. Ny Taon-jobily 2017 dia fialan-tsiny tsara hahalalana ny iray amin'ireo tanàna lehibe indrindra ao amin'ny faritr'i Murcia.
Ny sasany amin'ireo toerana miavaka indrindra hitsidihana an'i Caravaca de la Cruz dia ny Vera Cruz Sanctuary and Museum, ny fiangonana Salvador, ny fiangonana Soledad (tranombakoka arkeolojika ankehitriny) ary ny Fuentes del Marqués, toerana voajanahary misy hatsaran-tarehy tsy mampino.
Fizahan-tany any Eropa amin'ny tetezana Mey
Prague any amin'ny Repoblika Tseky
Miaraka amin'ny hatsaran-tarehiny bohemia sy tanàna taloha voatahiry tanteraka, Prague no toerana mety indrindra hahatongavan'i May Bridge. Betsaka ny toerana mahaliana izay azo fantarina eto toa ny Prague Castle (trano mimanda lehibe indrindra manerantany), ny lapan'ny tanàna taloha ary ny famantaranandro astronomia na ny Charles Bridge (iray amin'ireo toerana be fakantsary indrindra eto an-tanàna izay mamakivaky ny renirano mampifandray ny faritanin'i Malá Strana sy ny Old City) ankoatry ny maro hafa.
Rouen any Frantsa
Normandy dia faritra frantsay malaza noho ny hatsaran-tarehiny mahafinaritra, nahandro matsiro ary tanàna mahafinaritra. Iray amin'izy ireo dia i Rouen, renivohitry Normandy Ambony ary toerana nahaterahan'ireo olo-malaza tamin'ny tantara frantsay toa an'i Géricault, ilay mpanao hosodoko, ilay mpanoratra Flaubert na ilay mpanatontosa sarimihetsika Jacques Rivette.
Ny sasany amin'ireo fizarana manandanja indrindra amin'ny tantaran'i Rouen dia ny fanapoahana baomba tamin'ny Ady Lehibe Faharoa sy ny fitsarana an'i Joan of Arc, ilay olo-masina frantsay mahery fo ary mahery fo izay nitana andraikitra lehibe tamin'ny Ady Zato Taona.
Rehefa mandeha mamaky ny araben'i Rouen isika dia afaka mahita ireo harena ao amin'ity tranombakoka ao an-tanàna ity izay tsy mamela ireo mitsidika azy ho tsy miraharaha. Ohatra ny katedraly Gothic-ny, ny archiepiscopal palace, ny fiangonana Saint-Maclou (voahodidin'ny trano tsara tarehy antsasa-hazo), ny Saint-Ouen Abbey (matetika afangaro amin'ny katedraly dia ohatra tsara dia tsara an'ny Gothic flamboyant), ny lapan'ny Justice of Rouen na ilay famantaranandro lehibe (famantaranandro astronomika tamin'ny taonjato faha-XNUMX niova ho iray amin'ireo tranainy indrindra any Eropa).
Cologne any Alemana
I Cologne no tanàna fahefatra lehibe indrindra eran'i Alemana ary toerana fitsangantsanganana notakiana mafy tato ho ato. Ny sary masina lehibe an'ny Cologne dia ny katedraly (lehibe indrindra ao amin'ny firenena ary sangan'asa maritrano Gothic) nefa koa misy toerana hafa tena mahaliana toa ny fiangonana Romanesque any St.Gereon, ny kianja AlterMarkt, ny fiangonan'i San Martín el Grande , ny kianjan'i Heumarkt na ny tranom-bakoka sôkôla sy ranomanitra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tsangatsangana » Inona no ho hita » Toerana 7 samihafa ho an'ny tetezana Mey
Zavatra 6 tokony hatao sy jerena ao Cádiz maimaim-poana